ဗီဒီယိုဘလော့ Post # 1 | Martech Zone
ဗီဒီယိုဘလော့ Post # 1
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 5, 2006 Douglas Karr
ငါဒီဗီဒီယိုဘလော့ဂ်ဂါကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်မိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ငါ MacBook Pro, iMovie နဲ့ built-in ကင်မရာတွေနဲ့စမ်းချင်တယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
အခုပရိုဂရမ်ကိုပြန်သွားပါ။ (ငါ Sean ပါ။ ယနေ့ညမှာ Colts ဂိမ်း မှလွဲ၍ ... Go Colts) မှကတိပေးပါသည်။
Microsoft Office ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Facelift ရရှိသည်
5:2006 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 07
'စစ်မှန်သောအနုပညာ'၊ Sean နှင့်သင်ရှုပ်ထွေးနေမည်မဟုတ်! ဒါပဲ!
6:2006 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 25
သူ့ကို mac တစ်ခုပေးပါ။ လခ ...